Unogona kukurudzira chero ma Amazon Amazon tracking software here?
Kana mubvunzo wako wakabatana chaizvo neAmerica US tracking software mumutauro wekuti, ndinogona kukuratidzai Zvinyorwa zveIndaneti. Ino Amazon software tracking software inogona kuchengeta nhamba yezvose zvaunotumira - zviri nyore uye zviri nyore. Hazvina mhosva kuti iwe unogona kunge uripi panguva ino - zvose zvaunoda ndeyekuti iwe ugova nehuwandu hwekutumira uye chengetedza huwandu hwekutumira kwayo uye nzvimbo chaiyo.
Pakati pemakona akasimba ekutumira Amazon Amazon tsvakurudzo chekushandisa, ndinoda kujekesa zvikomborero zvikuru zvinotevera zvandakanakidzwa nazvo:
Tsvaga - kana iwe uri pakati pevashandisi veIngostiki, kuongorora purogiramu nekubatsira kwaGoogle Maps kunowanikwa nokusingagumi.
Kubvumirana - kubvumirana kwebasa basa rakandibatsira zvikuru apo ndakamanikidzwa kushanda pazvinhu zvakawanda - mobile casino no deposit bonus 2017 deutsch.
zviziviso zvemashure - hapana chikonzero chekuchengeta Maununuri nguva dzose achizaruka. Pane chakanaka chokugamuchira chiziviso chero nguva nguva yekutumira ishanduka.
Kugadzirisa - iyi shanduro yakave yakanyatsogadzirirwa mahwendefa. Ndakaiedza pafoni yangu zvakare - uye kwakanga kusina matambudziko nayo, ndainakidzwa nemafuta akazara-ezvo sekunge dai ndaiishandisa pane kombiyuta yangu yepakombiyuta.
Widget - yaive yakanaka uye yakanakisisa kuwedzera mahwindo ekutarisa pfupi pasina kuzarura chikumbiro - pamba pamba pangu.
Izvi zvakaratidzwa zvakandibatsira kwandiri semunhu asingashandisi. Kuti ndikuudze chokwadi, ndakanga ndisina mukana wekuedza pro pro version. Vanhu vanoti kana ukatenga iyo, haugoni kuwana mamwe mabasa, asi kubvisa zvivhiringidzi izvozvo zvinoshungurudza kamwe chete.Panguva imwecheteyo, pachava nehumwe humwe hutano hwekugadzirisa hunowanikwa paunenge watenga.
Uye kana iwe uchiri kufarira, heano mabasa makuru anouya neDeveries Pro (zvechokwadi, maererano nemushambadzi wepurogiramu):
Zvimwe zvinoshandiswa pakutsvaga sync izvo zvinoshanda pamwe nenyaya dzakawanda pa Amazon pachake, uyewo pa eBay.
Quite-mode setup uye yevashamba-free version.
nheyo dzakasiyana-siyana dzakasiyana-siyana dzinowanika mukusvikirika.
mimwe mitauro inotsigirwa nehurukuro yakabhadharwa.
Uye dzimwe dzakawanda zvekugadzirisa.
Kutengeswa Amazon Amazon US tracking app yakabatsira chaizvo kwandiri, kunyanya apo ndaifanira kuenzanisa maverengi akawanda evatengesi vangu kuAmazon ne eBay. Hazvizivi kuti kana mafuta avo akabhadhara zvakashandurwa chaizvoizvo zvinobatsira, asi izvo zvandinogona kutaura zvechokwadi - mavhesi avo asina kubhadhara zvakabatsira chaizvo kuti ndikanganwe pamusoro pevhiri chero ripi zvaro nekutsvaga kutengesa kazhinji-kamwechete uye kwevose.